ပန်ဒိုရာ: ငဝန်ဧရာ ပမ္မဝတီ ရွေးနဒီ တကြော မျောလာတဲ့ ဒိုက်တစ်မျှင်
ငဝန်ဧရာ ပမ္မဝတီ ရွေးနဒီ တကြော မျောလာတဲ့ ဒိုက်တစ်မျှင်
ကြယ် မကြွေ၊ တော် မလဲ
လက်နက် ဝင်းလက် မပြိုးပြက်
ဘုရားသခင် စွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ အမှိုက်တစ်စ
ငဝန်မြစ်ဝမှာ ငယ်မူကြွ လှနေတုန်း
အစုန် အဆန် ဆင်းခဲ့တယ်
အိမ်.. ဆိုတာရဲ့ ဒဿန
စပါးတွေ ဆားတွေ ငါးတွေကိုပေးတဲ့
ဓနိပင် လမုတန်း နုံးစပ်စပ်မှာ
ကမ်းမကပ်နိုင်တဲ့ ဒိုက်ဖတ်တွေ အတွက်
မြစ်တစ်စင်းထဲမှာ ရေနှစ်ခါချိုးလို့မရဘူး တဲ့
နှစ်ခါမက ထပ်ထပ်မှားခဲ့တဲ့ အမှားတွေကို
ဆားငန်ရေ ၀ သွားတဲ့ ဒိုက်မျှင်ဟာ
သံသရာကိုပါ မေ့လျော့စေတဲ့ မြစ်မှာ
အရာရာ အစိုးမရနိုင်တဲ့ လေထု
မေ ၂ ရဲ့ စစ်ကြေညာသံက
မျှော်လင့်ချက်တွေကို အငိုက်မိ လန့်နိုးစေတယ်။
မိစ္ဆာတွေရဲ့ ညှီစို့စို့ ရနံ့တွေကို
ရေငန်တရိုးက စောင်းသံနဲ့ မလှန်နိုင်ခဲ့
ပုဆိန်တွေ ၀ှက်ထားတဲ့ မြစ်စောင့်နတ်က
အနောက်ဘက်မှာ ငှက်တွေ အုပ်လိုက်ထပျံတယ်။
နမူနာ ချပြလိုက်တဲ့ မြစ်တို့ရဲ့လင်္ကာဟာ
စစ်.. တွေ ပြီးပြီလား
သည်ငမိုက် သည်ဒိုက်ကတော့ ကမ်းမကပ်သေးဘူး
အဝေးကနေ နာ ရုံလေး နာ နေလေရဲ့။
(မေ ၂ သို့)
(မိတ်ဆွေတစ်ယောက် လက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်လေးတွေပါ)
Posted by pandora at 12:00 AM
ဟေး... တို့ ၁ ကွ
Happy Birthday ပါ ပန်ပန်...
အမှန်က တို့ တစ်ပါ။ သက်ဝေကိုဦးစားပေးလိုက်တာ. သူငယ်ချင်းမို့လို့။။တို့က စောင့်နေတာ။ တစ်မဖြစ်ချင်လို့။
happy birthday ပန်ပန်။
2 May 09, 00:13
ုkom: စာရေးထားတာ သိတ်ကောင်းတယ။် တို့ ကွန်မက်ပေးရမှာအားနာလို့ ပညာရှင်တွေ အတွက်ချန်ခဲ့တယ်။ စစ်တွေ..ပြီးပြီလား။ မြစ်တွေ ကတော့စီးနေဆဲဆိုတာလေး အဖွဲ့ကလေးကိုကြိုက်တယ်။ တို့သာဆိုရင် မရေးတတ်ဘူး.တစ်နစ်လုံးရေးတောင် မရ
ဒီနေ့ က မမွေးနေ့ လား။
ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ မ...
အဝေးကနေ နာ ရုံလေး နာ နေလေရဲ့။”
ရင်ထဲ တည့်တည့်ရောက်လို့အပေါက်ကလေးတောင် ဖြစ်သွားပါတယ်...
ဒီနှစ်တော့ မနှစ်ကလို ၀မ်းမနည်းရလောက်ပါဘူး။ :)
ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ သတိရနေတုန်းပဲ။
မပန်..ပျော်ရွင်ပါစေ။ သူတို့လည်း .. ကောင်းရာမွန်ရာရောက်ကြပါစေ။ ဒုက္ခမှ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။
၀ိညာဉ်နှစ်သိန်းကျော်နဲ့ ပူဇော် ဆေးချလိုက်ပေမဲ့
လေထဲမိုးထဲမှောင်ထဲမှာ ငိုသံတွေ ကြားနေရတုန်း..
Initial = Final
တွေးခဲ့ဖူးတယ်… 1,2,3,4 and
Peril in distress
So niceapoem.
a Strength Poem.
I absorbed by hart.
မပန်ရေ.. တကယ့်ကို ထိထိမိမိ ခံစားရတဲ့ ကဗျာဇာတ်လမ်း ပါလားဗျာ။
တွေးရင် ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်း တွေးရင်း နဲ့ ...................။
၂၀၀၇ထဲက မေလကျကာမှ ပန်ဒိုရာဘလော့ကို ဖတ်ဖူးပြီး ကဗျာတွေအဖတ်မှာ ဖျားသွားခဲ့တယ်။
ပြီးတော့ ဆီလိဗီယာ ပလသ်လို.. ကြည်အေးလို... ပန်ဒိုရာ့ကဗျာစုစည်းမှုဆိုတာကို ခဏခဏ စိတ်ကူြး ကည့်မိဖူးတယ်..။ ခုဆို .. ပန်ဒိုရာကို ချစ်ခဲ့ရတာတောင် ၂နှစ်ရှိပြီကော အရီးရေ...။
ခုလည်း နာဂစ် မေ ၂ ကို ခံစားရတာ.. အဲဒီမှာ အကုန်ပါပဲလေ...။ :(
အမရေ .. မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ ။
အရင်တနှစ်ကလို ဒီတနှစ်လည်း တွေ့ကြရအောင် ။ တစ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်က တွေးကြည့်ရင် သိပ်ကြာနေသလို ... တကယ်ဖြတ်သန်းကြည့်တော့လည်း ခဏလေးနဲ့ ရောက်သွားသလိုပဲ ...
ဘ၀ရဲ့ နှစ်တိုင်းမှာ ကဗျာတွေနဲ့ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့နေနိုင်ပါစေ ။
- ညီမ -
နတ်ဆိုးရဲ့ နာဂစ်ပိုစ့်အောက်မှာ ခုလိုရေးထားခဲ့တယ် ..
အချိန်ရဲ့ကုစားမှုကြောင့် လျော့ပေါ့သွားစေတဲ့ အတိတ်၊
အဲလိုတွေနဲ့ပဲ ရပ်တန့်မနေဖို့ အရေးကြီးတယ်။
အလည်လာတိုင်း ကဗျာလို့ ဗုတ်ထည့်ခဲ့တာ
ဖွဲ့နွဲ့မှု၊ စကားလုံး အားလုံး..အားလုံးကောင်း၏။
တော်တော်ကောင်းတယ် မပန်။ ပုံရိပ် ကဗျာအကြောင်းနားမလည်ပေမယ့် ဖတ်သူ ခံစားသူ တယောက်အနေနဲ့ ပုံရိပ်တွေ၊ နိမိတ်ပုံတွေကို ပြတ်ပြတ်ထင်ထင် ခံစားနိုင်တယ်။ စကားလုံးတွေလည်း သုံးတာ ကောင်းလိုက်တာ။ မပန်ရဲ့ ကဗျာရေးနိုင်စွမ်းကို အားကျမိတယ်။ ဘာလိုလိုနဲ့ နာဂစ်ဟာ တစ်နှစ်တောင် ပြည့်ခဲ့ပေါ့။
မပန်ရဲ့ မွေးနေ့အတွက် ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ (မသက်ဝေ ပြောသွားတာကို ကြည့်ပြီးတော့လေ..)
မပန်ရေ.. ဘယ်လိုစကားလုံးမျိုးနဲ့ ကျွန်တော် စကားစရမလဲ.. အရမ်းကောင်းလွန်းလို့ ရင်ထဲမှာဆို့နင်ပြီး..
နှုတ်တွေ ဆွံ့အ သွားရတယ်.. ကွန်မန့်ရေးမယ့်လက်တွေကို တန့်သွားစေတယ်..
"ငဝန်ဧရာ ပမ္မဝတီ ရွေးနဒီ တကြော မျောလာတဲ့ ဒိုက်တစ်မျှင်" ကို လူလုပ်မြောင်းထဲက နောက်ထပ် ဒိုက်တမျှင်က တကူးတက ပြန်ရှာပြီး နာကျင်စွာ လာဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ။
ကယ်လီဖိုးနီးယားသို့ စံပယ်ပန်းတကုံး ပေးပို့ခြင်း